Maina: mpitantana CLI mifandraika amin'ny kaontenera Docker | Avy amin'ny Linux
Docker dia lozisialy ahafahan'ny virtualization amin'ny haavon'ny rafitra miasa fantatra amin'ny anarana hoe kaontenera, mampiasa ny endri-javatra fitokana-monina amin'ny kernel Linux, toy ny cgroups sy ny namespaces kernel, ary ny hafa hamela ireo kaontenera tsy miankina mihazakazaka ao anaty ohatra iray Linux.
Docker dia manome fomba iray ahafahana mampandeha am-pilaminana ireo rindranasa mitoka-monina ao anaty fitoeram-bokatra iray, feno ny fiankinan-doha aminy sy ny tranomboky rehetra.
Raha mpampiasa Docker ianao anio dia hiresaka momba ny rindranasa iray mety hahaliana anao.
1 Momba ny maina
2 Ahoana ny fametrahana ny dry amin'ny Linux?
3 Ahoana ny fampiasana maina?
3.1 Fanalahidy manerantany
3.1.1 Didy ho an'ny kaontenera
3.1.2 Baiko amin'ny sary
3.1.3 Baikon'ny tambajotra
3.1.4 Baiko amin'ny serivisy
3.1.5 Mandrosoa amin'ny buffer
Momba ny maina
Fitaovana ity mampiseho amintsika ny mombamomba ny kaontenera, ny sary ary ny tamba-jotra, ary, raha toa ka mihazakazaka ny Docker Swarm, dia mampiseho koa ny karazam-baovao rehetra momba ny satan'ny cluster Swarm.
Afaka mifandray amin'ny daemon Docker eo an-toerana na lavitra izany.
Ankoatry ny fampisehoana fampahalalana, azo ampiasaina hitantanana Docker. Ny ankamaroan'ny baiko ananan'ny Docker CLI ofisialy dia hita ao amin'ny Dry miaraka amin'io fihetsika io ihany.
Ahoana ny fametrahana ny dry amin'ny Linux?
Dry azo avy amina binary roa izy io ka tena tsotra ny fametrahana azy amin'ny Linux.
Ho an'ireo izay Arch Linux, Manjaro ary mpampiasa derivative dia afaka mahita maina ao AUR, noho izany dia tsy maintsy avelan'izy ireo AUR ao amin'ny rakitra pacman.conf.
Mba hametrahana azy dia tsy maintsy manoratra ity baiko manaraka ity fotsiny ianao:
ihany koa azo atao ny mametraka ny maina avy any Docker ho fitoeran-javatra iray, koa raha te-hametraka an'ity fomba ity ianao dia tsy maintsy manorata ireto manaraka ireto:
Ny fomba farany mankany fametrahana an'i Dry amin'ny Linux dia amin'ny alàlan'ny fisintomana script iray izay hikarakara ny fametrahana.
Tsy maintsy manokatra terminal isika ary manatanteraka ireto baiko manaraka ireto:
Vita ny fametrahana Afaka manomboka mampiasa ny rindranasa amin'ny rafitray izahay izao.
Ahoana ny fampiasana maina?
Manomboka mampiasa an'ity fampiharana ity amin'ny rafitray, Tsy maintsy manokatra terminal isika ary manatanteraka ity baiko manaraka ity:
Rehefa manao an'io dia tokony hiseho ny varavarankely mitovy amin'ity iray ity, izay mampiseho fa efa miasa ny maina ary mampiseho ny vaovao.
Dry azo ampiasaina amin'ny fampiasana lakile vitsivitsy, ka maka ny vaovao avy any ny toerana ofisialinao ao amin'ny github, ireto ny fidirana:
% Asehoy ny lisitry ny sivana
F1 Sivano ny lisitra
F5 lisitra fanavaozana
F8 asehoy ny kapila fampiasana dockable
F9 asehoy ny fisehoan-javatra docker 10 farany
F10 asehoy ny fampahalalana momba ny docker
1 asehoy ny lisitry ny kaontenera
2 asehoy ny lisitry ny sary
3 asehoy ny lisitry ny tamba-jotra
4 asehoy ny lisitra node (amin'ny maody Swarm)
5 asehoy ny lisitry ny serivisy (amin'ny maody Swarm)
Arrowup afindrao ny tsipika iray
Fitifirana afindra ny tsipika iray amin'ny tsipika iray
g afindra ny tampon'ny kursor
G afindra mankany ambany ny cursor
q miala amin'ny maina
Didy ho an'ny kaontenera
Midira mampiseho ny menio baikon'ny kaontenera
F2 alefaso / alao ny fampisehoana kaontenera nijanona
l hazo fitoeram-bokatra
Ctrl + e esory ny kaontenera rehetra nijanona
Ctrl + K Matar
Ctrl + r manomboka / manomboka indray
Ctrl + t fijanonana
Baiko amin'ny sary
Key na mitambatra
i firaketana an-tsoratra
r mampandeha baiko amin'ny kaontenera vaovao
Ctrl + d esory ny sary mihantona
Ctrl + e esory ny sary
Ctrl + f Fafao ny sary
Ctrl + e esory ny tamba-jotra
Baiko amin'ny serivisy
i jereo ny serivisy
l firaketana momba ny serivisy
Ctrl + r esory ny serivisy
Ctrl + s serivisy fijanonana
Midira asehoy asa fanompoana
Mandrosoa amin'ny buffer
g afindra amin'ny fanombohan'ny buffer ny cursor
G afindra amin'ny faran'ny buffer ny cursor
n aorian'ny fikarohana dia mandroso amin'ny valin'ny fikarohana manaraka
N aorian'ny fikarohana dia miverena amin'ny valin'ny fikarohana taloha
pg ambony afindra ny tsipika 'haben'ny efijery'
pg midina afindra midina ny tsipika 'haben'ny efijery'
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » fampiharana » Maina: mpitantana CLI mifandraika amin'ny kaontenera Docker